Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eHungary
Okufanele ukwenze eHungary
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseHungary
Bukela ividiyo ngeHungary
IHungary (Magyarország) izwe eliseCentral Europe emngceleni weSlovakia enyakatho, i-Austria iye entshonalanga, iSlovenia neCroatia eningizimu nentshonalanga, iSerbia eningizimu, Romania empumalanga ne-Ukraine kuya empumalanga esenyakatho. Ilungu le-European Union neSivumelwano se-Schengen Border-less Europe. Izwe linikeza izindawo eziningi ezihlukene: izintaba eziphansi enyakatho nentshonalanga, iGreat Plain empumalanga, amachibi nemifula yazo zonke izinhlobo (kufaka iBalaton - ichibi elikhulu kunawo wonke eYurophu Ephakathi), kanye nemizana emincane emincane namagugu afihliwe amadolobha. Yenza lokhu kube phezulu ngokutholakala okukhulu kweHungary maphakathi neYurophu, isiko nomnotho ocacile. Indawo engafanele neze ilahlekile uma uku esifundeni.
IHungary ingenye yezindawo ezivakashelwa izivakashi ezingama-15 emhlabeni, inhloko-dolobha ethathwa njengenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni. Naphezu kobukhulu bayo obuncane, iHungary inezindawo eziningi zamaGugu Omhlaba, izindawo zokugcina ze-UNESCO Biosphere, ichibi lesibili ngobukhulu emhlabeni (Lake Hévíz), ichibi elikhulu kunawo wonke eCentral Europe (Lake Balaton), kanye notshani bemvelo obukhulu eYurophu (Hortobágy ). Ngokuya ngezakhiwo, iHungary inesinagoge elikhulu kunazo zonke eYurophu (iGreater Synagogue), indawo yokugeza enkulu kunazo zonke eYurophu (Széchenyi Medicinal Bath), isonto lesithathu ngobukhulu eYurophu (Esztergom Basilica), indawo yesibili ngobukhulu emhlabeni (Pannonhalma I-Archabbey), isigodlo sesibili ngobukhulu seBaroque emhlabeni (Gödöllő), kanye ne-Christian Christian Necropolis enkulu kakhulu ngaphandle Italy (I-Pécs), indawo yesibili engaphansi komhlaba eYurophu neyesithathu emhlabeni wonke ngemuva I-New York futhi London (Millenium Ngaphansi).
Ungalindela ukuthola ukudla okuphephile namanzi, ukuphepha okuhle nesimo sezulu esizinzile sezepolitiki.
IHungary ayihehi abashokobezi futhi igcina amazinga ezidakamizwa nawobugebengu ngokulingana.
IHungary behlukahluka ngokokuziphatha selokhu yaqala ukwakhiwa, kanti kanti namhlanje abantu abangaphezu kwamaphesenti angama-90 bangamaHungary ngokuqondile, amaphakethe amaSlovaks ezinhlanga nezamasiko, Abantu baseRomania, AmaJalimane kanti abanye babe ezweni. Ngenxa yokushintshwa kwemingcele kweHungary ngemuva kweMpi Yezwe I, abantu baseHungary abangaphezu kwezigidi ezi-2 nezinhlanga bahlala emazweni asemngceleni. AmaHungarian, okuthiwa abizwa ngokuthi amaMagyars, ayinzalo yezizwe eziningana ezivela e-Central Asia, okwakukholelwa ukuthi anamahhashi anolaka, angahambi ngokuzimela futhi eza eCentral Europe ngekhulu lesi-9.
Amanani okushisa aphelele eHungary ahluka kusuka ku--20 ° C (-4F) kuya ku-39 ° C (102F) unyaka. Ukusatshalaliswa kanye nokuvama kwemvula akunakulindeka ngenxa yesimo sezulu sezwe. Izivunguvungu ezinamandla zivama ngemuva kwezinsuku zasehlobo ezishisayo, futhi imvula ivame kakhulu ekwindla. Ingxenye esentshonalanga yezwe ivame ukuthola imvula eningi kunengxenye esempumalanga, futhi kungaba nesomiso esibi ngesikhathi sasehlobo. Izimo zezulu eGreater Plain zingaba nzima kakhulu, uma kunehlobo elishisayo, ubusika obubandayo nemvula enamandla. Isimo sezulu senhloko-dolobha sinomswakama onamazwekazi wonke onomazinga okushisa entwasahlobo nasekwindla, ngesikhathi sasehlobo isimo sezulu sifudumele futhi imvula esindayo isizamile, kanti ubusika buyabanda kanti amazinga okushisa avame ukuba ngaphansi kwama-degree 0.
I-Central Hungary. Ingxenye yezwe evakashelwe kakhulu ngenxa yenhloko-dolobha iBudapest.
Ichibi leLake Balaton. Izinhlobo eziningi zezindawo ezivela ezindaweni zasemakhaya, ezinokuthula zewayini ziya emadolobheni athokomele.
Lesi sifunda somlando entshonalanga nomfula iDanube singenye yezwe elithuthukiswe kakhulu kwezomnotho ezweni.
INyakatho yeHungary. Amadolobha amakhulu omlando nokugeza komhume kuzobonakala lapha.
IGreater Hungary Plain. Esiqhelelwé kude nezwe lonke, lesi yisifunda esikhulu esinamathafa agobile. I-Szeged ingabhekwa njengenhlokodolobha engekho emthethweni yesifunda.
Budapest - ngamapaki anamaqabunga angama-jovial, iminyuziyamu edumile, iSifunda Esiphakeme SaseMiddle East kanye nokuphila ebusuku, i-Budapest ingelinye lamadolobha amnandi futhi amnandi eYurophu
Debrecen - idolobha lesibili ngobukhulu ezweni, isikhungo sezamasiko nezenkolo
I-Eger - idolobha elihle lasenyakatho elinenqaba yasendulo kanye ne-camera obscura
I-Győr - kunezindawo zokudlela ezinkulu zekhefi, izindawo zokudlela, izindawo zokuphumula kanye namakilabhu wasebusuku enkabeni yedolobha labo elihle laseBaroque
IKecskemét - idolobha elidume ngendawo yalo yomculo esebenzayo, iplamu brandy, nobuciko bokwakha i-Art Nouveau
IMiskolc - enegumbi lokugeza elihlukile eMiskolc-Tapolca, idolobha lesine ngobukhulu ezweni, eliseduzane nendawo enhle yaseBükk Mountans
INyíregyháza - idolobha eliphakathi nendawo elinendawo yokusebenzela amanzi ematasa, isigodi samamyuziyamu, nomkhosi wasekwindla waminyaka yonke
I-Pécs - isikhungo esimnandi samasiko nedolobha laseyunivesithi
I-Szeged - idolobha elishone kunabo bonke eHungary elinomlando ocebile ikakhulukazi
ISzékesfehérvár - Isihlalo sangaphambili saseRoyal, esidume njengamanje ngobuciko baso beBaroque neminyuziyamu
I-Aggtelek - emihumeni emihle enama-dripstones nama-stalagmites
I-Bükk - isigaba sobubanzi bezintaba zeCarpathian
IHarkány - idolobhana elinomlando eliseduze komgwaqo wewaini waseVillány-Siklósi odume ngethafa lawo
ILake Balaton - ichibi elikhulu laseHungary nelichibi elikhulu kunawo wonke eCentral Europe
AmaMohács - Ayedumile ngempi yamaMohács (1526, 1687), Lezi zimpi zazifanekisela ukuqala nokuphela, ngokulandelana kokubusa kwe-Ottoman eHungary. Njalo entwasahlobo, idolobha liba nomkhosi waminyaka yonke weBusójárás.
Izikhumulo zezindiza eziphambili zomhlaba wonke zaseHungary yiBudapest Ferenc Liszt International Airport eBudapest (eyake yaziwa ngokuthi “iBudapest Ferihegy International Airport”) kanye Nesikhumulo sezindiza i-Debrecen. Yilezi ezimbili kuphela ezinamabhanoyi ahleliwe. Kukhona ezinye izikhungo zezindiza zomhlaba ezisetshenziswa kancane; Isikhumulo sezindiza i-Hévíz-Balaton sinezindiza ezihamba ngezikhathi ezithile, izindiza zeGyőr-Pér nezasePécs-Pogány zisebenza kakhulu ezindizeni ezijwayelekile. IHungary ayinayo indiza ethwala izindiza. Kukhona abathwali bezindleko eziphansi ezimbalwa abasebenza eBudapest.
Abantu baseHungary bayaziqhenya ngokufanele ngolimi lwabo oluhlukile, oluyinkimbinkimbi, oluyinkimbinkimbi, nolunothile, isiHungary (uMagyar obizwa ngokuthi “mahdyar”). Ulimi lwesi-Uralic oluhlobene kakhulu neMansi neKhanty yasentshonalanga yeSiberia. Iphinde yahlukaniswa ngezilimi zaseFinno-Ugric ezibandakanya isiFinnish nesi-Estonia kanye nezilimi ezimbalwa ezikhulunywa eNtshonalanga naseNyakatho Ntshonalanga Russia; ayihlobene nhlobo nomakhelwane bayo: izilimi zamaSlavic, zamaJalimane, nezesiRomance zomndeni wolimi lwase-Indo-European. Yize zihlobene nesiFinnish nesi-Estonia, azithinteki; ukuthi ihlobene eduze nesiNgisi nesiHindi. Ngaphandle kwesiFinnish, kubhekwa njengezinye zezilimi ezinzima kakhulu kwizikhulumi zesiNgisi ukufunda nesilulumagama, uhlelo lolimi oluyinkimbinkimbi, kanye nendlela yokubiza amagama ihluke kakhulu. Ngakho-ke akumangazi ukuthi isikhulumi sesiNgisi esivakashele eHungary asiqondi lutho olusuka eHungary olubhaliwe noma olukhulunywayo. IHungary yamukela izinhlamvu zamagama zesiLatini ngemuva kokuba umbuso wamaKristu ngonyaka ka-1000.
Njengoba isiNgisi sifundisa kakhulu ezikoleni nasemanyuvesi, uma ukhuluma nabantu abaseminyakeni yobudala, amashumi amabili noma amashumi amathathu, uthola ithuba elihle lokuthi bazokhuluma kahle isiNgisi.
Kodwa-ke, ngenxa yomlando waseHungary, isizukulwane esidala siyothambekela ekukhulumeni isiNgisi. Lawa maHungary angakhuluma isiRussia, okwakuphoqelekile ngezikhathi zamaKhomanisi, yize iningi lingakaze lisebenzise kusukela lapho. Njengawo wonke amazwe asemva kobukhomanisi, abantu banganqikazi ukukhuluma isiRussia futhi bangaba nobandlululo kubantu abalukhulumayo. Kuwukuhlakanipha ukuzama nokuqala ingxoxo ngolunye ulimi futhi uma ungakwazi ukuqondana, buza ukuthi ngabe ukukhuluma ngolimi lwesiRussia kungamukeleka yini.
IGerman iyasiza kakhulu futhi icishe ikhulunywa kabanzi njengesiNgisi, futhi cishe kuyo yonke indawo eduze komngcele wase-Austrian ikakhulukazi iSopron, ebhalwe ngezilimi ezimbili futhi inezixhumi ezikhulu zokuxhumana neVienna ngoba itholakala ngezitimela zaseVienna ezingaphansi komhlaba. Kulezi zindawo kanye nabantu asebekhulile bebonke, isiJalimane kwesinye isikhathi sizokuthatha sikudlule kakhulu kunesiNgisi. ISpanishi, isiFulentshi nesiNtaliyane yizilimi ezisezingeni eliphakeme ezikoleni futhi ziyanda ukuvelela lapho kunamanani andayo emafemu okusekela ezweni.
Uzoba nethuba elingcono kakhulu lokuthola umuntu okhuluma olunye ulimi (ikakhulukazi isiNgisi nesiJalimane) emadolobheni amakhulu, ikakhulukazi kulawo anamanyuvesi anjenge Budapest, Debrecen, I-Miskolc, ne-Szeged.
I-Budapest, kufaka phakathi Amabhange aseDanube, iBuda Castle Quarter kanye neAndrássy Avenue
Idolobhana Elidala LaseHollókő kanye Nezindawo Ezizungezile
Izindwangu zika-Aggtelek Karst noSlovak Karst
I-Millenary Benedictine Abbey yePannonhalma kanye nemvelo yayo yemvelo
IHortobágy National Park - iPuszta
U-Christian Christian Necropolis wasePécs (Sopianae)
I-Fertő / Neusiedlersee Cultural Landscape
I-Tokaj Wine Region Umlando Wamasiko Wezwe
Enye indawo enkulu evakashelwa izivakashi yiLake Balaton, enezindawo zokugcina iwayini, i-spa eshisayo eHévíz nxazonke.
Tiszavirágzás. Maphakathi noJuni i-Tisza ikhiqiza iminyuzi yezinyosi ezifaniswa nezimbali. Lapho sekuncishisiwe ukungcoliswa, inani labantu liyaphindeka. (Zidume ngokuphila ngezinsuku ezi-1-2.)
Izinyoni zibukele. IHungary indawo enhle kakhulu yokubuka izinyoni (aka birding) iholide. Kunamagquma anezinkuni, izinhlelo ezinkulu zamachibi kanye notshani, ipuszta. Izindawo ezinhle ikakhulukazi zibandakanya i-Kiskunsag neHortobagy National Parks kanye ne-Aggtelek, iBukk neZemplen Hills.
Ukugibela amahashi. Izindawo ezivulekile zasemaphandleni ezivulekile ezihambisana namasiko amade okwenziwa amahhashi enza iHungary izwe elihle lokugibela. Amathafa amakhulu avulekile eningizimu namagquma amahlathi asenyakatho anikela ngezindawo ezihlukene zokugibela.
Amabhati. Amanzi afudumele ayanda eHungary eneziphethu ezishisayo ezingaphezu kuka-1000 ezweni (ezingaphezu kwe-100 endaweni yaseBudapest) eziningi zazo eziye zaguqulwa zaba ngamabhathi nezikhala. Okudume kakhulu ngokuba ngamabheski aseSzechenyi eBudapest. Yaqedwa ngo-1913 futhi yakhiwa ngesitayela seRan Renaissance. Lesi yisakhiwo sokugeza esikhulu kunazo zonke eYurophu, indawo yaso yiBudapest City Park. Kukhona, kepha, kunamakhulu emabhati ngamunye ezweni lonke. Ukugeza komhume eMiskolc-Tapolca kanye ne-spa e-Egerszalók kuyizibonelo ezinhle. Izindlu zokugeza zokuqala ezakhiwa amaRoma eminyakeni engaphezu kuka-2000 eyedlule.
"I-Budapest Museum Museum" Kunezigaba ezintathu ezinkulu. Isigaba se-Roman Antiquities and Archaeology (i-Aquincum Museum). Isigaba se-Medieval (I-castle Museum). Futhi isigaba se-Age Age (Kiscelli Museum).
“Isikhumbuzo Sokubulawa Kwabantu Ngokubulawa Kwesizwe” Kuwumbukiso obonakalayo okhombisa imibhalo yokuqala nezinto ezivela ekuQothulweni Kwesizwe. Kukhona nomtapo wezincwadi, indawo ethengisa izincwadi, isitolo sekhofi, kanye neBraham Information Center. (izinkambo eziqondisiwe nazo ziyatholakala)
"House of Terror Museum" Imibukiso yayo igubha izisulu zombuso wobandlululo nobukhomanisi eHungary ngekhulu lama-20. (Kubandakanya nalabo ababoshwe, baphenye ngemibuzo, bahlukunyezwa noma babulawa esakhiweni.) Kuveza ubudlelwano bezwe nezwe lamaNazi Germany futhi i-Soviet Union phakathi kweminyaka yabo yokusebenza.
“ILake Balaton” Ichibi elikhulu kunawo wonke eCentral Europe futhi kukhona amadolobhana amaningi emaphethelweni alo ancela izivakashi. Ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu ngamaholide.
Ama-Euro manje amukelwa emahhotela amaningi nakwezinye izindawo zokudlela nasezitolo. Qiniseka ukuthi ubheka inani lokushintshaniswa, kepha, ngezinye izikhathi ngisho nezindawo ezaziwayo (njengeMcDonald's) zizoshintshana ngamanani angenangqondo.
Ungasebenzisa amakhadi amakhulu wesikweletu (i-EuroCard, i-Visa) ezitolo ezinkulu nezindawo zokudlela ezinkulu, kodwa ungalokothi ulindele lokho ngaphandle kokubheka kuqala. Izindawo ezincane azikwazi ukukhokhela amakhadi. Ama-ATM atholakala ngisho nasemadolobheni amancane, ukumbozwa kuhle.
Ngenkathi uqedela noma yikuphi ukuthengiselana ngemali, kungcono ukukhokhela i-forint lapho ungakwazi. Ezinye izindawo zokudlela namahhotela zikhokhisa inani elinyukayo lokushintshaniswa kwe-euro futhi kaningi, ngenxa yokushintshashintsha kwamanani okushintshaniswa, izindleko nezinsizakalo ezishiwo zingahluka kakhulu.
Kwakunezinhlaka ezingama-284 zedola laseMelika nezindawo ezingama-319 eziya e-euro. Ukuthenga eHungary kushibhile kakhulu kubantu abavela e-US nase-euro zone.
Ngaphandle kwezikhumbuzo eziyisikhumbuzo zabavakashi njengamakhosikhadi namathikithi, nazi ezinye izinto ezihlukile eHungary noma okunzima ukuzithola kwenye indawo.
Izinongo: IPaprika kanye neHungary Saffron
I-Gundel isethi ushizi: ubudala kumawayini weGundel noma ngezicucu ze-walnut noma isoso. Itholakala kalula kuma-350g amasethi ezinhlobo ezintathu ezingasebenzi kwi-Ferihegy Airport eBudapest (okungenani ku-Terminal 2), kodwa kungenzeka itholakale eGundel 1894 Food & Wine Cellar (bheka iPest # Yidla). Khumbula ukuthi impilo yeshelufu lwalesi shizi izinyanga ezimbili kuphela.
Amawayini: iTokaji, i-Egri Bikavér (bheka uLiquor), iwayini elibomvu elivela endaweni yaseVillány njll.
I-Pálinka: brandy edume kakhulu futhi eqinile eyenziwe ngezithelo.
I-Unicum: i-herbal digestive diquetive.
I-Herend: I-porcelain yesandla yokunethezeka ebunjiwe.
Izifundo eziphambili kumamenyu zivame ukuthi zibe yi-HUF2,500 3,000-1,500 ezindaweni zokuvakasha eBudapest, HUF1,800 2009-XNUMX ngaphandle kwayo, noma emadolobheni afana ne-Eger neSzentendre (Mashi XNUMX).
Isidlo sasemini eBudapest yi-HUF900-8000 umuntu ngamunye, futhi ingxenye noma ingxenye eyodwa kwezintathu yaleyo ngaphandle kweBudapest. (Imenyu yokudla okusheshayo yamaShayina icishe i-HUF500).
Ezitolo zokudlela, inkokhiso yensizakalo ivame ukufakwa kubili, i-10% noma ngisho ne-12%, kepha lokhu kufanele kukhonjiswe ngokucacile kwimenyu. Uma kungashiwongo, indawo ayinalungelo lokufaka imali ekhokhwayo kwinkokhelo.
Noma kungekho mali ekhokhwayo, ngaphandle kokuthi insizakalo ibingeyinhle iningi labantu baseHungary bathambekele ekushiyeni ithiphu ephanayo (ubuncane be-10%). Ngokungafani emazweni amaningi asentshonalanga, ithiphu imvamisa ayishiywanga etafuleni, kodwa kunalokho inani lichaziwe kubasebenzi abalindile lapho ukhokha.
Emadolobheni amakhulu naseceleni kwemigwaqo emikhulu ungathola izindawo zokudlela zamaketanga amakhulu aphesheya njengeKFC, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Subway ne-TGI Friday's.
Abantu baseHungary bayaziqhenya kakhulu ngokudla kwabo (Magyar konyha), futhi iningi lesikhathi ngaphandle kwesizathu. Ukudla kuvame ukubabazekayo (kepha kungashisi ngokwezindinganiso ezijwayelekile), futhi kunambitheka kunokuba okunempilo - izitsha eziningi zilungiswa ngentwele noma zithosiwe ngokujulile. Isinongo sikazwelonke yi-paprika, eyenziwe ngopelepele be-bell omnandi futhi empeleni enokunambitheka okuthile lapho kusha. Isitsha sikazwelonke siyi-goulash, kepha amaHungary abiza usimende obukhulu obabizwa ngokuthi yi-goulash kwenye indawo ngegama elithi pörkölt futhi agcinele igama elithi gulyás lesobho esilula se-paprika.
Inyama iyathandwa- ikakhulukazi ingulube (ama-sertés), inyama yenkomo (i-marha) ne-venison (őz). Okungaphansi kakhulu iwundlu ne-mutton. Izinhlanzi ezinhle kakhulu eHungary izinhlanzi zasemfuleni: uCarp (uPonty) noFogas (Zander), yize zokudlela eziningi zizokhonza izinhlanzi eziqhamuka kude. Inkukhu (csirke) neTurkey (pulyka) futhi ejwayelekile, futhi uzothola izinyoni zemidlalo ezinhle kakhulu ezindaweni zokudlela ezinhle kakhulu nezindawo zezwe- Pheasant (Fácán), Partridge (Fogoly) kanye nedada (Kacsa). Ukudla okujwayelekile kuzobandakanya isobho, imvamisa njenge-commommé (erőleves), inyama enamazambane (burgonya) nesaladi eseceleni, nesiphuzo esinjenge-pancake (palacsinta).
Okungaziwa kakhulu emhlabeni wonke ama-paprikás csirke, inkukhu ku-paprika isoso, ne-halászlé, isobho lezinhlwayi zepaprika ngokuvamile ezenziwe nge-carp.
IGoose nayo ithandwa kakhulu eHungary. Ngenkathi izivakashi zibuka isibindi se-goose (libamáj), eshibhile ngamazinga aseNtshonalanga, mhlawumbe isidlo esijwayelekile kunazo zonke yi-sült libacomb, umlenze owugazingiwe. Imifino yokugcotshwa (töltött) yazo zonke izinhlobo nayo iyathandwa, futhi ama-pancake amaHungary (palacsinta), omnandi futhi amnandi, ayindlela yokwelapha. Ukudla okuvamile kufaka i-kolbász, inguqulo yesiHungary yesosi yasePoland ye-kielbasa, kanye nama-lángos, inhlama ethosiwe ngokujulile enezinhlobonhlobo ze-toppings (ukhilimu omuncu omningi, ushizi kanye / noma igalikhi).
Isidlo saseHungary sicishe njalo - ngisho nasekuseni sasekuseni - sihambisana nokhukhamba waseHungary esibizwa ngokuthi i-savanyúság, ngokwezwi nezwi elithi “ukumuncwa”. Lokhu kuvame ukubizwa ngokuthi yi-saláta kumamenyu, ngakho-ke qoqa i-saláta ye-Vitamin uma ufuna ama-veggies amasha. Isitashi sivame ukusetshenziswa njengamazambane, ilayisi noma ama-dumplings (galuska 'noma i-nokedli), umnikelo oyisisekelo waseHungary kule nsimu luhlobo olungenasici lwe-pasta encane enkulukazi efana ne-tarhonya.
Kuhle ukuvakashela i- “Cukrászda” uma useHungary. Lezi zithandwa kakhulu ngamakhekhe amnandi nekhofi. Zama i-Krémes yendabuko (enokhilimu we-vanila), u-Eszterházy (amantongomane amaningi) noma uSomlói Galuska.
Okunye okuthandwayo yiLángos, yisinkwa esenziwe ngokujulile, esifana ne- “whales-umsila noma umsila we-beaver” kodwa eHungary, singafakwa nganoma yikuphi ukugcwaliseka okungacatshangwa. Okuvame kakhulu ukuthi kucacile, ngosawoti, ugalikhi (fokhagyma) no-ukhilimu omuncu (tejföl). Uma uthola indawo yamaLangos, kuvame ukuba nenombolo enkulu yezinketho ezivela kuma-pizza ama-pizza, noma amaqanda ane-mayo noma i-nutella nobhanana.
Isitsha esidumile semifino kuyo yonke iMpumalanga Yurophu iKaposzta Teszta (kaposhta tasteta) Iklabishi elinama-noodle. In Poland, ibizwa nge-kapusta z kluski noma i-haluski, eCzech Republic, yaziwa ngokuthi i-nudle s zelí, futhi amaSlovak ayibiza ngokuthi yi-haluski. Lokhu kungaba isidlo semifino ngokuqinile, ngesinye isikhathi esinamakhowe. Lesi sidlo eseceleni noma ukunikela nge-main-course kuphakama kahle etafuleni le-buffet.
Abasebenza imifino kanye namaVegan bayoba nokudla okulula njengokudla kwamanye amazwe asentshonalanga. I-Budapest akuyona inkinga, njengoba kunezindawo zokudlela ezahlukahlukene ongakhetha kuzo, kodwa endaweni yokudlela ejwayelekile yaseHungary ama-ma-non-inyama mains kumenyu anqunyelwe kakhulu kuma-rántott sajt (ushizi othosiwe) no-gombafejek rántva (amakhowe othosiwe) .
Kodwa-ke, eminyakeni yamuva nje, ukudla kwase-Italy sekudume kakhulu, inqobo nje uma ungakunaki ukudla okune-pasta okusindayo njenge-imifino uzothola ukukhetha okubanzi.
Uma umuntu oyedwa ezenzela ezitolo ezinkulu noma ezitolo nasezimakethe zasendaweni, noma kunjalo, ukukhethwa kwezithelo nemifino kulungile impela, ikakhulukazi ehlobo. Amapentshisi aseHungary nama-apricots amnandi (thenga kubalimi ezimakethe zendawo).
Kunezindawo eziningi zokudlela zemifino ne-vegan, kanye nezitolo eziningi zokudla zezempilo ezinikeza zonke izinhlobo zemikhiqizo yezitshalo / ye-vegan (kufaka phakathi izimonyo). Izitolo ezijwayelekile njengeGroby phakathi kweminye imikhiqizo zithengisa yonke into kusuka kumasoseji e-vegan kuya kumayonesi.
Sekukonke, sebenzisa imithetho efanayo njengoba wenza ekhaya, futhi kufanele ukondliwe kahle.
IHungary, ngokuvamile, iyizwe eliphephe kakhulu. Ngokusho kocwaningo olwenziwe ngonyaka ka-2012 lweHhovisi Lezizwe Lezidakamizwa Nobugebengu, iHungary yayinezinga lokubulala ngenhloso ngabazinkulungwane eziyi-1.3 kuphela. Lokhu kuphansi kwesilinganiso sokubulawa kwabantu ngenhloso kwase-100,000, kanti futhi kuphansi kwesilinganiso sokubulawa kwabantu ngenhloso kwase-3.5 kubantu abangu-3.9.
Noma kunjalo, ubugebengu obuncane ikakhulukazi buhlala buyinkinga, njengakwelinye izwe. Bukela umthwalo wakho namaphakethe ezithuthi zomphakathi. Kukhona ingozi yamakhethini. Amaphasiphothi, imali, namakhadi wesikweletu yizitha ezithandwayo zamasela. Gcina izinto ongazigcini ehhotela lakho ziphephile noma zihlala endaweni ephephile, kodwa qaphela ukuthi amaphakethe, izikhwama nezinsalela zasemakhaya kusengozini enkulu, noma ngabe zivala nge-zipper. Kuphinde kube nemibiko yabantu abantshontshwe izimpahla zabo belele esitimeleni, ngakho-ke qaphela lokho. Isikhwama- nokuhlwitha isikhwama, yize kunqabile, akuzwakali.
Imvamisa, iHungary ithula ukuthula ebusuku uma iqhathaniswa namanye amazwe aseYurophu, futhi ubugebengu kubavakashi bunqunyelwe ekuthengeni izinto kanye nasekukhohliseni ekugcineni ngentengo kanye nezikweletu namalungiselelo etekisi.
Umbutho wamaphoyisa uqeqeshiwe futhi uqeqeshiwe kahle. Kodwa-ke, umuntu kufanele abe nolwazi oluhle lwesiHungary ukubacela usizo njengoba iningi lamaphoyisa lingasakwazi nakancane ukukhuluma noma yisiphi isiNgisi.
Imithetho yaseHungary ayinakubekezelela ngokuphelele ukuphuza nokushayela, futhi inhlawulo inzima. Kusho ukuthi akukho phuzo oludakayo oluvunyelwe ukudakwa uma ushayela, akukho dakwa legazi lakweliphi izinga okwamukelekayo. Ukwehluleka ukukhokha inhlawulo kungahle kudale ukuthi ipasipoti yakho ithunjwe, noma isikhathi senjele kuze kube yilapho ukhokha inhlawulo.
Okubaluleke kakhulu ukuthi amaphoyisa amisa izimoto njalo ukuthola amasheke. Akufanele ukhathazeke uma umiswa ngoba ngokomthetho, wonke umuntu kudingeka ukuthi amaphepha abo wokuhlonza ahlolwe.
IHungary inesinye esibi kakhulu, uma kujeziswa izinhlawulo uma abantu bebandakanyeka engozini yemoto. Ukubandakanyeka engozini yemoto kuphumela ekuhlawulweni, futhi mhlawumbe nesigwebo sasejele sisuka onyakeni owodwa kuya eminyakeni emi-1 (ngokuya ngezimo ezihlasimulisa umzimba).
I-1956 Revolution iyaqhubeka nokuba yisihloko esizwelayo nomphakathi wamaphiko ofanele kanye nabantu abaningi asebekhulile. Akufanele uxoxisane ngeSivumelwano SikaTrianon (1920) nabezizwe - bangasithatha ngobuhle.
Ukuvulwa okukhanyayo kwenkanyezi ebomvu yamaKhomanisi kanye nesando sesimboli, isimboli yamaNazi swastika ne-SS, kanye ne-Hungary fascist Arrow Cross, kuvinjelwe ngumthetho. Qiniseka ukuthi izingubo zakho azinazo lezi zimpawu kuwo, noma ngabe kuyihlaya nje. Ungahlawuliswa ngakho.
Amalungu omphakathi wamaGypsy angathola ilebula yendabuko yesiHungary 'Cigány' (isabiz. 'Tzigan') icasula kancane, ikhetha ukubizwa ngokuthi iRom.
Njengomkhuba wasemakhaya, abantu baseHungary bazibiza ngokuthi “badansa izinyembezi emehlweni ethu” (“sírva vígad a magyar”), njengoba beshiya phansi izinkulumo zabo ezinenhlanhla emlandweni wabo omude. Gwema ukuhlekisa ngomlando waseHungary kanye nokuthanda izwe.
Lapho ungena ekhaya, izicathulo kufanele ngokuvamile zisuswe.
Noma uhlangana nomuntu wobulili obuhlukile okokuqala, akuyona into engjwayelekile ukuqabulana ngezihlathi esikhundleni sokuxhawula izandla njengokubingelela.
Kuyisiko lakudala (yize kulezi zinsuku kungagcinwa yiwo wonke umuntu) ukuthi abantu baseHungary abagcini izingilazi zikabhiya noma amabhodlela kabhiya. Lokhu kungenxa yenganekwane yokuthi ama-Austrian agubha ukubulawa kwabaFelokazi abangama-13 baseHungary ngonyaka we-1849 ngokunamathisela izingilazi zabo zikabhiya, ngakho-ke abantu baseHungary bafunga ukuthi ngeke banqwabelane nobhiya iminyaka engu-150. Ngokusobala lesi sikhathi sesiphelelwe yisikhathi, kepha imikhuba emidala ifa kanzima. Lokhu akusilandelwa kangako yisizukulwane esincane kunazo zonke.
Ukufinyelela i-Intanethi kwe-Broadband manje sekugcwele ezweni laseHungary. Kujwayelekile kakhulu ukuthola ukufinyelela kwe-Intanethi kwamahhala (i-Wi-Fi) ezikhungweni Zokuthenga eBudapest, kumakhofi amaningi nasezitolo. Uzoba nokufinyelela kwe-Wi-Fi ngisho nasemadolobheni amancane. Funa izibonakaliso ze- “Wi-Fi”, kungadingeka ukuthi ucele iphasiwedi yokufinyelela, kepha uma usebenzisa, izonikezwa ngokukhululekile.
IHortobágy National Park - I-Puszta
I-Fertö / Neusiedlersee Cultural Landscape